वीर र विक्रम बन्दै नाजिर र आकास, बर्षाको भूमिका के ? – Mero Film
वीर र विक्रम बन्दै नाजिर र आकास, बर्षाको भूमिका के ?
फिल्म ‘वीर विक्रम २’ निर्माण हुने भएको छ फिल्म मिलन चाम्सले निर्माण तथा निर्देशन गर्ने भएका छन् । व्यवसायिक रुपमा हिट फिल्म वीर विक्रम निर्माणको पाँच बर्ष पछि उक्त फिल्मको सिक्वेल निर्माण गर्न लागिएको हो । राजधानीमा कार्यक्रमका बीच निर्माण टिम तथा कलाकारहरुको वारेमा जानकारी गराइएको हो ।
फिल्ममा बर्षा शिवाकोटी, आकाश श्रेष्ठ, नाजिर हुसेन लगायतको मुख्य भुमिका रहने छ । यसका साथै बुद्धि तामाङ, शिशिर राणा, क्षितिजा सुवेदी, विजय लामा लगायतको समेत अभिनय रहने छ । यहि फिल्मबाट विनिशा भण्डारीले डेब्यु गर्दैछिन् ।
वीर विक्रमको सिक्वेल बिर विक्रम २ मा कलाकार नाजिर मात्रै दोहोरिएका छन् । मंसिरबाट फ्लोरमा जाने बताईएको बिर विक्रम २ आगामी नयाँ बर्षलाई लक्षित गरी प्रदर्शनमा ल्याइने निर्माण टिमले बताएको छ । फिल्मलाई सुदिप बरालले खिच्नेछन् भने कविराज गहतराज र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफि, हिमाल केसीको द्धन्द, राजनराज शिवाकोटी, रंजित गजमेर र तारा प्रकाश लिम्बुको संगीत तथा बनिश शाहको सम्पादन रहने छ ।
२०७५ कार्तिक १६ गते ११:४९ मा प्रकाशित